Iindaba -Izibonelelo zeemfama
1. Ukhetho lweSimbo
Iimfama zeenkuni zinokuzisa i-rustic, classic, okanye imvakalelo yanamhlanje kwindawo. Zifumaneka kuhlobo lombala kunye nokukhethwa kwemvakalo, ezinje ngoqalo, ipayini, i-paulownia, i-bass kunye ne-beech, isenza ukuba kube lula ukufumana isitayile esifanelekileyo segumbi ozihombisayo. Ezi mpumputhe zikwakhuthaza ukubukeka okucocekileyo, okucocekileyo ngaphandle kobubanzi okanye ubude. Ukuba uthatha isigqibo sokuphinda uhlobise, kulula ukuziphinda-phinda ukuthelekisa ukuhombisa kwakho okutsha.
Inkuni inokusetyenziswa nakweliphi na igumbi, kubandakanya neendawo ezinamanqanaba aphezulu okufuma njengekhitshi okanye igumbi lokuhlambela. Zombini iinkuni kunye neemfameki zeenkuni ezenziwe ngamehlo zenziwe ngezinto ezizinzileyo ezenzelwe ukubamba ukufuma. Ziyacocwa kwaye zitywinelwe ukhuseleko olongezelelekileyo kunye nokuphila ixesha elide kunezinye iindlela ezingaboniyo.
3. Isondlo esisezantsi
Iindidi zeenkuni kulula ukuzigcina kwaye ziya kubamba ngokuchasene nokungcola, uthuli kunye nokungcola. Ukucoca rhoqo ngentyatyambo okanye ilaphu le-microfiber kususa ngobunono amasuntswana omhlaba. Ukucoca okunzulu, amanzi afudumeleyo kunye nomqhaphu womqhaphu uya kucoca ubumdaka. Unokusebenzisa uncamathiselo oluthambileyo lokuthintela ngokukhawuleza, nangokufanelekileyo.
4. Ukuba bucala
Ngenxa yokuba iinkuni zingabonakali, ubumfihlo buqinisekisiwe Ngelixa ezinye izinto zihamba kwaye izithunzi zibonakala, iinkuni ziya kufihla nantoni na ongafuniyo ukuba uyibone ngaphakathi kwendawo yakho. Kwigumbi lokulala, zilungele ukuthintela ukukhanya ngokupheleleyo kokulala okungcono.